musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kodzero Dzevanhu » Mupombi, MuNjiva Yadeurwa: Panogara Vasina Musha
tsika nemagariro • Kodzero Dzevanhu • nhau • ushanyi • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kunogara vasina pekugara
Nevanhu vazhinji vasiri pamabasa uye vazhinji vakasarira kumaroja kana imbai, kushaya pekugara kuri kutonyanya kuva denda nekuda kwedenda re COVID-19.
Kune vane rombo rakanaka, avo vanozviwana vasisina pekugara vanokwanisa kugara kunhengo dzemhuri mudzimba dzavo.
Kune avo vasina kumwe kwekuenda, kune matumba, asi nzvimbo ishoma kwazvo.
Saka avo vanozviwana vari mumigwagwa vawana dzimwe nzira dzakasarudzika dzekugadzirisa kushaya pekugara.
Zvichida chimiro chinowanzojairika chekugara kwenguva pfupi itende. Dzinomera senzvimbo diki dzinotevedza nzira dzemumigwagwa uye mumapaki nekukurumidza sekukura kunoita howa husiku. Maguta mazhinji anoita "kutsvaira" uye kumanikidza vasina pekugara kuti vabve, vanowana chete misasa mitsva yakatamiswazve kumwe zuva rinotevera. Ndiwo mutambo wenguva dzose wekutenderedza iwo madhiri uye nekuyambuka Monopoly mutambo bhodhi rekushaya pekugara.
Pasi pemabhiriji inzvimbo dzakajairika uko vasina pekugara unganidza uye kazhinji kazhinji vane nzanga dzakajeka. Izvo zvinobatsira kuve nehumwe pekugara pamusoro pemamiriro ekunze uye zvakare kuti usave unoonekwa kubva mukunzvera maziso evasina pekugara. Dzakati wandei dzenzvimbo idzi misasa, mataundi madiki, ayo ari dzimba dzevanhu mazana mazana chaiwo.
Kune vakawanda nguva pfupi yadarika vasina pekugara, vachiri nemota dzavo uye vanotora pekugara ipapo. Kugara mumotokari kunonzi Vehicular Homelessness, uye kuri kuwedzera mumaguta mhiri kweUS. Kune vanhu vanopfuura zviuru gumi nezvitanhatu vanogara mumotokari dzavo muLos Angeles, California, vega.
Mune mamwe maguta, mitemo yakadzikwa kurwisa vasina pekugara kubva pakurara husiku mumotokari dzavo. Mamwe maguta ane moyo wakanaka anoshandisa nzvimbo dzekupaka vanhu kuti vamise husiku kuti varare mumota dzavo. Runyerekupe rune kuti WalMart inogona kukanganwira mota dzinopedza husiku munzvimbo dzadzo dzokupaka.